गजल – DreamLandNepal.com
नींद नहुने भए सपनीको (गज़ल)
२१ माघ २०६९, आईतवार १५:०८
On: २१ माघ २०६९, आईतवार १५:०८
– किरण टी लिम्बू नींद नहुने भए सपनीको के नै अर्थ हुन्छ र रात नहुने भए बिहानीको के नै अर्थ हुन्छ र ।। यो अर्थै-अर्थले जेलिएर अल्झेको मायावी संसारमा, माया नभएको भए जिन्दगानीको के नै अर्थ हुन्छ र ।। रीतिथिति,धर्म र दायित्व निभाउनै पर्ने समाजमा, घरबारै नचाहनेलाई अर्धाङ्गिनीको के नै अर्थ हुन्छ र ।। आमालाई मायाकी खानी पुजिने मन-मन्दिरमा, ममता नभएको भए जननीको केContinue Reading
मेरो हो सुस्ता!!
२७ मंसिर २०६७, सोमबार ०१:५१
On: २७ मंसिर २०६७, सोमबार ०१:५१
– पोष्टराज चापागाइ लौन भारत, सत्य बोल् त, तेरो हो सुस्ता ? इतिहास पढी हेर् त , मेरो हो सुस्ता ! नेपालीको रासोबासो सबै लुटदै, तेरा डाका आई बस्ने डेरो हो सुस्ता ? विशाल त्यो नेपालको छाती रेटेर, मेरी आमा ! भनी लाको बेरो हो सुस्ता ! आफ्नो देश रक्षाContinue Reading